Masuuliyiin ka tirsan dawladda Somaliland oo ka qaybgalay Xaflad loo sameeyey Ciidda Kirismiska ee Gaalada iyo Culimo Khubadiihii Jimcaha si adag ugaga hadlay | Berberanews.com
Home WARARKA Masuuliyiin ka tirsan dawladda Somaliland oo ka qaybgalay Xaflad loo sameeyey Ciidda Kirismiska ee Gaalada iyo Culimo Khubadiihii Jimcaha si adag ugaga hadlay
“In wixii Illaahay kuugu cadhoonayey aad ku faraxdo oo aad xalaashato, ayaan-darro weyn bay leedahay. Munkaraadka dhaca Ciidaha Kufaarta ee dadku ay isku dayayaan inay aad u qaddariyaan waa Xaaraan.” Sheekh Maxamed Cumar Dirir“Nebi Muxamed (SCW), intii uu noola immisa December ayaa soo maray? Xafladdan Nebigu wuu ka hadlay oo waxa uu ku sheegay Xafladdii Kootaliga, Rasuulku waxa uu yidhi; ‘Qofka qolo iskala mid dhigaa iyaguu ka mid yahay’…” Sheekh Cismaan Cali Xuseen
Hargeysa(Berberanews)- Wasiirro iyo Agaasimayaal ka tirsan Xukuumadda Somaliland, ayaa habeenkii Khamiistu soo galayso ka qaybgalay Xaflad ballaadhan oo lagu xusayey Ciidda Kirismiska ee sannadka cusub oo lagu qabtay Huteel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Iyada oo ay Cilimada Hargeysa Khudbadihii Jimcaha ee Shalay si weyn ugaga hadlay sida ay Diinta Islaamka uga soo horjeedaan munaasibadaha iyo dabbaal-degyada loo sameeyo sannadka cusub ee taariikhda Bilaadiga.
Xafladdaas oo ay soo qaban-qaabiyeen sida la sheegay Hay’adaha USAID iyo IOM, ayaa la sheegay inay ka qaybgaleen illaa shan Wasiir, Agaasimayaal iyo Masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Somaliland, waxa sidoo kale, ka soo xaadiray Madaxda Hay’adaha Shisheeye ee dalka ku sugan iyo Saraakiil ka socday Ururrada Waddaniga ah qaarkood. Waxaana Xafladdaas lagu lagu sheegay mid ay Hay’adahaasi ku soo bandhigayaan wax-qabadkooda sannadan dhammaadka ah ee 2011-ka iyo sidoo kale qorshayaashooda sannadka bilaabmaya ee 2012-ka. Hase ahaatee, sida ay Wargeyska Ogaal u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka lagu casuumay Xafladdaas waxa ku lammaanayd Munaasibad ay Hay’adahaasi ugu talagaleen in loogu dabbaal-dego Ciidda Kirismiska ee sannadka Cusub oo si weyn looga Xuso Waddama Gaalada.
Haddaba, Culimada ayaa qofka Muslimka ah ee ka qaybgala Ciidaha Kiristaanku u samaynayaan, isla markaana ugu dabbaal-degayaan sannadka cusub ee taariikhda Bilaadiga ee 2012-ka uu yahay qof xalaashaday macsiyo iyo wax Illaahay cadho-gelinaya. Muftiga Somaliland Sheekh Maxamed Cumar Dirir, ayaa Khudbaddii Jimcaha shalay ka jeediyey Masaajidka Rusheeye ee badhtamaha Caasimadda Hargeysa, waxa uu dadweynaha, gaar ahaan Waalidiinta iyo Madaxda ugu soo jeediyey inay Dhalinyaradooda ka joojiyaan ka qaybgalka Xafladaha loogu dabbaal-degayo Ciidda Kirismiska ee sannadka cusub.
“Wax dhammaaday sannadkii bilaadiga ahaa, waxa bilaabmaya kii cusbaa, hore ayeynu ummadda u baraarujinnay inuu sannadka Islaamku ay tirsadaan uu yahay ka Hijriyada, markaa waxaynu baraarujin lahayn haddii aynu nahay dadkii Madaxda ah iyo Masuuliyiinta munkaraadka dhaca caawa oo kale dhalinyaradu intay happy new year yidhaahdaan la Ciidaan oo la dabbaal-degaan ama Baadhiyo la sameeyaan Hay’adaha ama dadku ay is-qaawiyaan oo ay Huteello tagaan, munkaraadka iyo fawaaxishka noocaas oo kale ah dhibaatooyinka ka dhasha innaga ayey cidhib xumadoodu innagu soo noqonaysaa.” Sidaa ayuu yidhi Sheekh Maxamed Cumar Dirir oo qayb ka mid ah Qudbaddiisa shalay ku soo qaatay arrintani dhibaatada ay leedahay iyo waajibaadka looga baahan yahay dadka Muslimiinta ah wakhtiyada Gaaladu Ciidayaan.
Sheekh Maxamed Cumar Dirir, oo Khudbaddiisa sii wataa waxa uu intaa ku daray oo yidhi; “Markaa inaad ka baraarugsanataaan oo qoloba xaafadda ay joogto oo dadka ka baarujiya, oo wixii macaasi ah farxad yaan laga raadin, xalaasha iyo shaygii mubaax ah ayaa laga raadiyaa farxad, laakiin macsiyada iyo dembiga inaad ku faraxdaa waxay keenaysaa in wixii Illaahay kuugu cadhoonayey aad ku faraxdo oo aad xalaashato, ayaan-darro weyn bay leedahay. Munkaraadka maalmahaas oo kale dhaca iyo Ciidaha Kufaarta ee dadku ay isku dayayaan inay aad u qaddariyaan waa xaaraan.”
“Ummad Islaam ah baynu nahay oo shaqsiyaddooda leh, doorka tusaalaha innaga ayaa qaadanayna, ummadaha kale dhaqammada iyo akhlaaqda tusaale innooguma aha. Dhalinyarada aan diinta aqoonta u lahayn ama ummadaha shisheeye dhaqammadooda u haysta wax horumar ah ku baarujiya oo yaanay ku tallaabsannin wax cidhib ximadiisu innagu soo noqonayso oo macaasi ah.” Sidaa ayuu yidhi Sheekh Maxamed Cumar Dirir.
Sidoo kale, Culimada Khudbaddii Jicmaha shalay kaga hadlay dabbaal-degyada Ciidda Kiristanka ee sannadka cusub waxa ka mid ahaa Sheekh Cismaan CalI Xuseen oo Masjidul Sacaada ee magaalada Hargeysa, khudbaddii Jimcaha ka jeediyey. “Waxa dhamMaaday sannadkii Kiristanka ma is weydisay sannadkan ay ugu dambaysay December yaa leh halkuu ka soo bilaabmay? Asal shareecada ma ku leeyahay? Yaa leh Habeenkan aad Hudheelada u sii kiraysateen ee aad Fannaaniinta u sii kiraysateen ama aad u diyaar-garoobaysaan inaad qabsataan? Xafladihii aynu odhan jirnay shaydaanka ee (Hapy new year) yaa leh waar yaa leh halku ka yimi halku ka soo jeeda? Marka aynu Xajayno bilo ayeynu tirsannaa December miyannu Xaji karnaa ama February haddii aanay ku beegmin bilaheenna Xajka? Bilahan yaa leh, magacyadoodu halkeebay ka soo jeedaan ma garanaynaa? Haddaba, dhaqankasta oo laga soo waardo ummadaha Gaalada ah oo sidooda loogu dhaqmo qofkasta oo la yimaadda waa qof Gaalada iskala mid dhigaya ama isu ekaysinaya. Xafladda la sii diyaarsanayaa, Huteellaa la diyaarsanayaa, Dadkii tumi lahaa ayaa diyaarsan waana dad Islaam ah oo masaakiin ah. Maxaa sababayay habeenka yaa leh? 25 December yaa leh bal isweydii?.” Sidaa ayuu yidhi Sheekh Cismaan Cali Xuseen.
Sheekh Cismaan waxa uu sheegay Nebigeennii suubbanaa ee Muxamed Nabadgeliyo iyo Naxariisi korkiisa ha ahaatee, inuu ka hadlay Ciidaha Kirismiska, oo waxaanu Sheekha oo daliilkaa ka hadlayaa yidhi; “Nebi Muxamed nabadgeliyo iyo naxiiri korkiisa ha ahaatee (SCW), intii uu noola immisa December ayaa soo maray immisa January ayaa soo maray? Xafladdan Nebigu wuu ka hadlay oo waxa uu ku sheegay Xafladdii Kootaliga, markaa, Rasuulku waxa uu yidhi; ‘Qofka qolo iskala mid dhiga iyaga ayuu ka mid yahay’. Iska ilaali inaad ka qaybgasho Xafladaha Kiristanku leeyahay ama Yuhuudi leedahay ama kuwa Asnaamta caabudaa ay leeyihiin, ha qaadan Hadyadda lagu siiyo, ha qaadan Hadyadda uu Gaalku ku siiyo maalintan oo kale.”
“Walaallayaal Xafladda sannadkan cusub ee Bilaadiga haddii aad ka qaybgasho waa mid aad weynaynayso wixii Gaalada gaarka u ahaa oo waa sida Ciiddeenna oo kale ayey iyaga (Gaalada) u tahay. Markaa, arrintaasi waa mid khatar badan leh oo loo baahan-yahay in la iska ilaaliyo oo Diin aanu Illaahay raalli ka ahayn oo aad adigu raalli ka tahay waa mid aad ku Gaaloobayso, markaa waxaad kala kulimi kartaa dhibaato wayn. Waxaana loo baahan yahay in arrintaa la iska ilaaliyo oo aan lala dabbaal-degin Gaalada Munaasibadooda sidan oo kala ah.” Sidaa ayuu yidhi Sheekh Cismaan Cali Xuseen.
Previous PostJose Mourinho:Qofkii Dhaha Real Madrid Ma Ciyaarto Kubad Fiican Been Ayuu Sheegayaa. Next PostJohan Cruyff: Real Madrid Nasiib Darro Ayay Ku Tahay Inay Ka Ciyaaraan Horyaal Ay Ka Ciyaarto Barca.